Ahoana no hampijanonana ny mitranga sy mitomany?
Ny ranomaso no rafitra fiarovana ny vatana ary miaraka amin'ny olona hatramin'ny fotoana nahaterahany ka hatramin'ny fiafaran'ny fiainana. Ny ranomaso sy ny fitarainana ihany koa dia fomba iray hanamaivana ny fihenjanana izay efa naharitra nandritra ny fotoana lava be sy tsy navotsotra. Raha ny marina dia mila miantso antsika indraindray ary mahazatra izany. Saingy mitomany noho ny fahasosorana sy ny tabataba kokoa ny laingany, noho izany dia mieritreritra ny fomba hisorohana ny fitarihana sy ny fitomaniana.
Mba hahafantaranao ny fomba hampitoniana haingana sy tsy mitomany dia tsy maintsy tadidinao aloha fa ny ranomasom-pahoriana dia tsy hanampy azy amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra.
Vetivety dia tony sy tsy mitomany.
Ny zavatra voalohany tokony hatao amin'ny toe-javatra toy izany dia ny manafoana ny antony mitomany. Raha tsy azo atao izany, dia tokony hanondro ireto fomba manaraka ireto ianao:
Fomba fijerena lalina. Mila manomboka mialoha ianao, satria Raha mampihatra io fomba fanao io mandritra ny fitarainana mafy ianao, dia mety hitarika aretina mahery vaika izany, izay hampitombo ny toetry ny olona iray. Ny fototry ny fomba fiasa dia toy izao manaraka izao: mba hampitony ny olona, ​​dia tokony hifoka rivotra lalina ny vorona (manoloana ny orony), mihazona ny fofony mandritra ny fito segondra ary manafaingana tsikelikely. Tsy maintsy misy fofona sy fofona fito. Ity teknika ity dia hanampy tsy vitan'ny hoe hampitony haingana, fa koa hanatsarana ny fampidiran-dra sy ny fanaraha-maso ny fanamafisana.
Matetika ny eritreritsika no mitranga amintsika, manomboka mihiaka isika satria misy olona nanao zavatra tsy mety, araka izay tadiavintsika, ary mitomany satria mitombo ny tsy fahampiana ary mila mandroso izy. Mba hahatakarana ny haavonavona haingana mandritra ny fitarainana, mila mianatra ny fomba hifehy ny eritreritrao ianao. Ilaina ny mahafantatra tsara ny eritreritra mitarika ho any amin'ny hysteria ary misoroka azy ireo.
Ampiasao ny fomba fanoratana. Raha mampahory sy mampalahelo anao izany, raha mitodika eo amin'ny masonao ny ranomaso ary atsaharo azy ireo, dia makà taratasy kely ary diniho ny antony mampalahelo. Tsy ilaina ny maha-mpanoratra na mpanakanto iray, tsy voatery hanoratra betsaka ianao ary haka sary na hanao sary. Afaka manoratra teny iray amin'ny litera lehibe ianao, na afaka manoratra amin'ny an-tsipiriany ny zava-drehetra, dia afaka manoritra zavatra izay hanampy anao hampitony. Ary aorian'izay, rehefa tony ianao, dia ho afaka hamakafaka ny sarinao na ny taratasy ianao ary hahatakatra ny antony nahatsapanao fa ratsy be tamin'izany fotoana izany.
Raha tsy afaka ny ho tony ianao dia atsaharo ny mihiaka ary toa tsy hijaly na oviana na oviana ny fijaliana na oviana na oviana ary mieritreritra hoe: "Mandalo ny zava-drehetra, ary handalo izany." Angamba mety ho androany izao ny faran'izao tontolo izao, fa ho avy ny andro vaovao ary ity olana ity dia lasa zavatra taloha.
Ahoana ny fomba hanesorana ny fitiavan'ny olona iray?
Ny toe-tsaina mampihetsi-po - fampiharana ny fampivoarana ny fisainana ara-analyse
Psychosis - soritr'aretina
Karazana fitenenana amin'ny psikology
Soso-kevitra sy soso-kevitra
Ny soatoavin'ny fianakaviana
Tongotry ny zandary hanatsara ny diksionera
Sasha Obama miasa toy ny mpividy
Tovovavy any amin'ny Sheepdog any Kaokazy
9 toerana izay mbola anaovana fombafomba, mitarika ny fiarahamonina maoderina ho hatezerana!
Actovegin ho an'ny vehivavy bevohoka
Fanampin'ny kôkômbinina ao amin'ny trano fonenana
Hamoy ny mofo ao anaty lafaoro
Firaisana mandritra ny 7 volana amin'ny maha-bevohoka azy
Famotehana ny faritra bikini
Alika mpiandry alika
Ny Andron'i St. Catherine
Tea miaraka amin'ny ginger
Ahoana no hanamafisana ireo fanaka?
Aretina marary aorian'ny fampiofanana - inona no tokony hatao?